Madaxaweynihi hore ee dalka Mwai Kibaki oo hawlo caafimaad loogu dhoofiyay waddanka Koofur Africa – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxaweynihi hore ee dalka Mwai Kibaki oo hawlo caafimaad loogu dhoofiyay waddanka Koofur Africa
starfmke August 22, 2016
Madaxweynihi hore ee dalka Mwai Kibaki ayaa diyaarad siday waxa ay ka kacday garoonka diyaradaha ee Wilson Airport waqti dambe ee shalay waxana la sheegay in Kibaki uu u ambabaxay waddankaas koofur Africa si xaladiisa caafimaad loogula tacaalo.
Sida laga soo xigtay ilo wareedyo ku agdhaw madaxweynihi hore ee dalka Mr Mwai Kibaki ayaa waxa habeenimada sabtida loola cararay isbitaalka Karen ee magaaladatan Nairobi kadib marki xaladiisa caafimaad laga deyriyay iyado la sheegay in ay soo wajahday dhibatooyin kaga yimid shilki u galay sanadki 2002-da.
Biisha Desembar ee sanadki 2002-da ayay ahayd marki Kibaki oo waqtigaas ahaa musharaxa xilka madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka dalka loo duuliyay waddanka boqortoyada Ingiriiska si daryeel caafimaad loogu fidiyo kadib marki u gaari u isaga watay u galay shilki gaari xili u ka soo laabtay olole u ku doonayay in loogu doorto xilka madaxtinimo ee dalka taas oo ka dhaceysay magaalada Machakos.
Isla sanadkaas ayaa Kibaki waxa loo doortay in u noqdo madaxweynaha 3-aad ee soo mara tarikhda waddanka Kenya waxana loo dhaariyay in u xilkaas qabto 30-ka biisha desembar ee sanadka 2002-da.
Qoyska madaxweynihi hore ee dalka ayaa waxa ay xaqiijiyen in loo duuliyay waddanka koofur Africa si halkaas loogu sameeyo daryeel caafimaad oo khaas ah kadib marki u la soo dersay xanuun.
Kibaki oo u wehlinaayay dhaqtarkiisa iyo qaar kamid ah qoyskiisa ayaa waxa ay sheegen in gordhaw ay filayan in u dalka dib ugu soo laabto waxana ay sheegen in Kenyanka ay daqiiqad daqiiqad ku wargelin doonan xaalada caafimaad ee madaxweynihi hore ee dalka waxa ay sidoo kale ka codsadeyn in dadka Kenyanka ah ay u soo duceeyan Mr Kibaki.
← Golaha odayaasha beesha Luo oo dalbaday 34 milyan
Hanti aan cadadkeeda la cayimin oo ku baabaday dab ka kacay suuq kuyaala Nyamira →